မရာဘာသာစကား (အင်္ဂလိပ်: Mara language) သည် များသောအားဖြင့် ချင်းမ်တွီးပီး ခရိုင်၊ အရှေ့ပိုင်း မီဇိုရမ်၊ အိန္ဒိယ တလို့ဆိုင်မျိုးနွယ်စုများ၏ ရွာများ (ရွာပေါင်း - ၃၀) များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေထိုင်ကြသော အချို့သော မရာရွာများတွင် နေထိုင်ကြသော မရာလူမျိုးများပြောဆိုသော ကူကီ-ချင်း ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ; မြန်မာနိုင်ငံ
(၄၀၀,၀၀၀ ခန့် ရည်ညွှန်း ၁၉၉၄–၂၀၁၁)
Mara ( Tlosais ) ဘာသာစကားများသည် တရုတ် - တိဘက်ဘာသာစကားမိသားစု၏ ကူကီချင်း ဌာနခွဲ တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများတွင် ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားများ၏ပြောဆိုသူများကိုလည်း Mara (Tlosais) ဟုလည်းလူသိများသည်။
Mara သည် Mara ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်ကောင်စီ၏ ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ Mara သည် MADC ကျောင်းပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့အောက်ရှိ Class VII (အလယ်တန်းကျောင်း) အထိ ကျောင်းအားလုံး၏ မသင်မနေရဘာသာရပ် ဖြစ်သည်။
လူ ဦး ရေ - အိန္ဒိယ၊ ဆိုက်ဟား ခရိုင်တွင် ၅၆၅၇၄ ဦး(၂၀၁၁)၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၃၇၀၀၀ (၂၀၀၇) ။
ဒေသ - ဆိုက်ဟား ခရိုင်၊ မီဇိုရမ် (အိန္ဒိယ)၊ အိန္ဒိယ - မြန်မာနယ်စပ်
အခြားအမည်များ - လခဲ၊ မာရာ၊ မရာမ်၊ မီရာ၊ ဇွန်၊ ရှဲန်းဒူး၊ ခေါ်ဆိုင်၊ ခေဲန်း။
ဘာသာစကားများ - တိလို့ဆိုင်၊ စီးဇိုး (ကျပိ / ဆဘောင် / ငဖိုင်)၊ လှိုင်ပွန်း(ဗဟာပီး၊ လိုင်လင်း နှင့် ဟေမန်)၊ လောင်ဗော်(နိုရှို နှင့် နိုတလဲ)၊
လို့ကျိမ်၊ ဇိုဖေ(အနှိုင်းဗောင်တု၊ ဘွီးပတ် နှင့် အဆာ/လေသာ့)၊ ဆက်ထန်(ခွာပိ/ဆိုင်ထန်)၊လေင်တူ(အော်ဆတ်/ကနှုတ်) နှင့် ဆာ့သ်
မျိုးနွယ်စု - ဇိုဖေ၊ ဇိုတူ၊ လေင်တူ၊ ဆက်ထန်၊ တလို့ဆိုင်၊ လှိုင်ပွန် နှင့် ဟော်ထိုင်
မာရာအက္ခရာ (စာလုံးကြီးများ) - A, AW, Y, B, CH, D, E, F, H, NG, K, L, M, N, NG, O, Ô, P, R, S, T, U, V, Z မရာ အက္ခရာ (အက္ခရာများသေးများ): a, aw, y, b, ch, d, e, f, h, i, k, l, m, n, ng, o, o, p, r, s, t, u, v, z မရာ သရတွဲများ - ao, yu, ai, ei, ia, ua
နာမ်၏ အများကိန်းကို အောက်ပါပေးထားသော စကားလုံးများထဲမှ တစ်ခုကို သက်ဆိုင်ရာ နာမ်ပုဒ် တစ်နောက်၌ ဆက်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
zy ( ဇီ)
zydua ( ဇီ-ဒွာ့)
sahlao (ဆလွှန် )
လက်သည်းကွင်း အတွင်းမှ စကားလုံးများသည် နိုင်ငံခြားသားစာရေးဆရာ အန်အီး ပယ်ရီ (NE Parry) (၁၉၃၇)က အသံကိုသူ၏နားလည်သဘောပေါက်မှုနှင့်အညီရေးသားခဲ့သည့် စကားလုံးများ ဖြစ်သည်။ ယခုမူ မရာ တွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အက္ခရာများရှိပြီးမှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုကိုထိုနေရာတွင်ထားရှိသည်။
မရာဘာသာဖြင့် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း စကားလုံးများ
အဘယ်သို့ : Khâpa, Khâpa, Khâpa maw
ဘယ်မှာလဲ : Khataih lâ, Khataih liata
ဘယ်လို : kheihta, kheihawhta, Khatluta, Kheihta maw
ဘယ်လောက်လဲ : Khazie
ဘယ်လောက်ကြာ : Khachâ e, Khachâ maw?
ဘယ်အချိန်မှာ : Khatita, khatita e, Khâpa nota, nota, tita, nahta, pata, စကားဆက်။ thlaita, khati nota
အဘယ်ကြောင့် : Khazia, Khazia-e, Khazia maw, Khâpa vâta
အဘယ်ကြောင့် မဟုတ်တာလဲ : Khaziaachâ vei chheih aw
ဘယ်ဟာ : Kheihawhpa, Kheihawhpa he, Kheihawhpa-e, Kheihawhpa maw, ahy he maw
ဘယ်သူ့ဟာ : Kheihawhpa, Kheihawhpa he, Kheihawhpa-e, Kheihawhpa maw, ahy he maw
သူငယ်ချင်း : Viasa
အမျိုးသားသူငယ်ချင်း : Viasa Paw
အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ : Viasa Nô
လမ်းလျှောက် / သွား : Sie (Phei ta Sie
ပြေး : râ, ârâ
အိပ်စက်ခြင်း: Amô, Azia, Apazawh, A mo, A Zia တစ် pazawh
ကြည့်ပါ : Moh, hmô
ထိုင် : Â tyuh,atyuh
မတ်တတ်ရပ် : Â duah, aduah
ခုန် : Â pathluah, apathluah
ကန် : : Âchô, achô
စား : Nie သောက် : Doh
1st person- keima (သို့) kei ငါ
2nd person- Nâma (သို့မဟုတ်)သင်က nâ
တတိယ ပုဂ္ဂိုလ် - ano oraama 'သူ၊ သူ၊
eima ကျနော်တို့ person- 1st
ဒုတိယ ပုဂ္ဂိုလ်၊ nma သင်
သူတို့က âmo person- 3rd
Keima, ei - ကျွန်ုပ်၊ ၏ဟာ။
keima eih kei eih - ကျွန်ုပ်၏ဟာ။
Nâma, Nâ - သင် (မင်း)။
Nâma eih, na eih - သင်၏ဟာ (မင်းရဲ့)
Ama, Amâ - သူ့ကို, သူမ၏, ဒါဟာ။
Ama eih,aeih - သူ၏၊ သူမ၏၊ ၎င်း၏။
Keimo - ကျွန်ုပ်တို့။
Keimo eih - ကျွန်ုပ်တို့၏ဟာ။
Nâmo - သင်တို့။
Ahyrai - မည်သူမဆို။
Ahy tlyma - တစ်စုံတစ်ယောက်။
Atlâhpi - အချို့ ... အခြားသူများ။
A hropa - အခြား၊ အခြားသူများ။
Ama zydua ta - အားလုံး။
မရာ at Ethnologue (18th ed., 2015)
Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Mara Chin"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
Maraland ။ လူများစကားပြောမာရာဘာသာစကား၏အိမ်
Maraland.org MITCS ဝဘ်ဆိုဒ်
Lakher ဘာသာစကား၏သဒ္ဒါနှင့်အဘိဓာန် (၁၉၀၈) ( အင်တာနက်မော်ကွန်းတိုက် တွင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောစာအုပ်)